ကြည့်မိသူတိုင်း အသည်းတယားယား ဖြစ်သွားရလောက်အောင် အတွင်းသားအလှလေးတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ ပုံရိပ်များ – Real Link
ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ…သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် မရမ်ဆိုင်းနု ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်..။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင် ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူ ထား တဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် လေး ဖြစ်ပါ တယ်..။ လတ်တလော မှာ တော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှ တရား တွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားထား တဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကို ဖော်ပြထား တာ တွေ့ရပါ တယ်..။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူ တွေများပြား ခဲ့တာ ဖြစ် ပြီး ပုရိသ တွေ အများ ဆုံး ဝန်းရံခြင်း ခံနေ ရတာ လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာ ကို လည်း လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ် တွင် အများဆုံး တင် လေ့ ရှိတာ လည်းတွေ့ ရပါ တယ်..။သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အ တူ လှပကြည်လင် တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထား ပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူ လေးလည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။
ပုံလေးထဲ မှာ မရမ်ဆိုင်းနု. တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက်လွန်း နေ ပြီး သူမ ရဲ့ ပရိသတ်ကြီး အတွက် တင်ပေး ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ်..။သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှ က တော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ချစ် ပရိသတ် ကြီး လည်း ဆိုင်းနူး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေး ကို ကြည့်ရှုနိုင် စေ ရန် ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ်…။
ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီးေရ…သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္ မရမ္ဆိုင္းႏု ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္..။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ နဲ႔ ပုရိသေတြရဲ့ ရင္ ကို ဆြဲေဆာင္ညိဳ႕ယူ ထား တဲ့ အလန္းစား ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလး ျဖစ္ပါ တယ္..။ လတ္တေလာ မွာ ေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား အလွ တရား ေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားထား တဲ့ အလန္းစား ပုံေလး ကို ေဖာ္ျပထား တာ ေတြ႕ရပါ တယ္..။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူ ေတြမ်ားျပား ခဲ့တာ ျဖစ္ ၿပီး ပုရိသ ေတြ အမ်ား ဆုံး ဝန္းရံျခင္း ခံေန ရတာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး မ်ားစြာ ကို လည္း လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚ တြင္ အမ်ားဆုံး တင္ ေလ့ ရွိတာ လည္းေတြ႕ ရပါ တယ္..။သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ နဲ႔ အ တူ လွပၾကည္လင္ တဲ့ အသားအေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထား ၿပီး သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အားျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္နိုင္ သူ ေလးလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။
ပုံေလးထဲ မွာ မရမ္ဆိုင္းႏု. တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္လြန္း ေန ၿပီး သူမ ရဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ တင္ေပး ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ အလွ က ေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ခ်စ္ ပရိသတ္ ႀကီး လည္း ဆိုင္းႏူး ရဲ့ အမိုက္စား ပုံေလး ကို ၾကည့္ရႈနိုင္ ေစ ရန္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ ပါ တယ္…။
Previous post အဖြူရောင် ဝတ်စုံလေးအောက်က ဖွေးဥနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ပြသလိုက်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်
Next post ပုရိသတွေ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေမယ့် နန်းမွေစံရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး